Dareen Common dhigaya in guud ahaan waxaa la qabsado leh dalabyo gaar ah ugu. Xitaa ma jiro heshaan waa macquul in aad ka fikirto in ay jiraan waxa laga yaabaa in. Fikirka Tani waxay u ogolaaneysaa inaad joogto oo aad ilaalin iyo hubi heshiisyo ay si taxadar leh ka hor inta aadan u galaan. Mararka qaar waxa aynu la kulanaa laga yaabaa galay dabin sababtoo ah waxaan samayn noo shaqada guriga si fiican u, aad u caqli badan oo ku saabsan ama dhakhsada. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah dabinka aad u baahan tahay in laga war hayo marka aad ku soo iibsato hoos imaad caymis baabuur.
Ka dib markii xigashada ugu horraysa Iibsiga
Tani waa bilaaw ah qalad in la sameeyo. Haddii aan aad tahay qof khabiir ku ah mawduuca sida aad ku ogaan lahayd in aad helayso caymiska wanaagsan oo qiimo haddii aadan is barbar fursadaha aad? Marka aad aad u dooneysa inay hesho gaari cusub daboolay si deg deg ah si aad baabuur wadi karto laga yaabaa in aad naftaada dabin galay imaad ah ku filnayn ama qaali.
Waxay qaadataa dhowr saacadood oo inta badan maalmood si aad u baadhid baabuur. Waxaad si fudud u hubin kartid, siyaasadaha ku habboon in waqtigaasina. Ma aha in aad gaariga ka hor inta aadan ka heli kartaa xigasho waxaa loogu. Haddii aad ahaayeen inaad wacdo Somailand maalin kasta ah oo leh faahfaahin baabuur kala duwan si aad u hesho xigasho ay doonaan si dhakhso ah khaati aad la. Si kastaba ha ahaatee, dhufto ee quote online ogolaado in aad ka heshaa qiime u gaadhi kasta oo la siiyo. Waxaad isticmaali kartaa qalabka sida ugu badan ee aad rabto in aad tan iyo waxaad samaynayso shaqada.
Gadashada Caymiska filneyn
Mid ka mid ah khaladaadka ugu badan oo darawallada u sameeyaan waa in ay u maleeyaan in siyaasadaha waxay noqon doonaan wax badan ka jaban haddii ay tagaan ugu yaraan gobol looga baahan yahay masuuliyadii cover. Farqiga u dhexeeya premium caymiska aasaasiga ah iyo mid dhamaystiran noqon kartaa labo kaliya ee boqol oo doolar mararka qaarkood gaar ahaan marka aad dukaanka agagaarka dhegaysta.
Cover aasaasiga ah waa ugu yaraan buuxda oo aad waxaa lagula talinayaa in ay soo iibsato qaamaha ku filan dabooli halkii. Intaas waxaa sii dheer, siyaasadahaas u bixiyaan caymiska lahayn ee khasaaraha adiga kuu gaar ah. Baabuurta yihiin maalgelinta guud badan oo dadka intooda badan. Soconno $5,000 ee auto duug isticmaalay muuqata sida maal ah adiga marka aadan haysan lacag badan. Marka aad si fiican u shaqeystaan ​​oo ay leeyihiin lacagta aad noqon lahayd baabuur wadista ah $50,000 baabuur kastaba ha'ahaatee. Labada xaaladood waxay noqon lahayd maalgashi ballaaran oo aan si loo hubiyo inay.
Doorashada dhakhtarka xad dhaafka ah
Guud ahaan, sare laga jari karo ee hoose khidmadaha heli. Sidaas, haddii gaar ah quote caymiska baabuur badan oo ka jaban tahay inteeda kale oo ka mid ah waa inaad ogaataa laga jari ka. Tani waa lacagta lagaa rabo inaad bixisid Laabtaada ka soo bixi ka hor inta uu caymisku bixin kartaa inta kale ee magdhow ah. Haddii aad u dhigay mid aad u sareeya ee aad la kulmi kartaa inaad bixiso magdhaw ugu naftaada. Oo waxaad heli lahaa way ku adag tahay in ay wax ka qaban haddii aad leedahay wax ka badan hal dhacdo nasiib-darro ah in sanad.
Marka laga reebo Drivers
Nidaamku waa A heerka dabooli qof kasta oo ku nool isla guriga kula sidoo kale wax kasta oo darawallada marmar. Marka aad aqbasho xigasho caymiska baabuurta cheap waxaa laga yaabaa inaadan u hubiso ee loo ogol yahay inay kaxeeyaan baabuur. Haddii aad Ma ogolaaneyno in qof kasta oo kale in u wado baabuurkaas la caymiyay dhab laga yaabaa in aad dooneysid in aad xaddiddo darawallada in ay heshiiska ama darawallada ku qoran oo keliya in ay lacag kaydsadaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado cidda uu yahay iyo kuwa aan la caymis inay kaxeeyaan baabuur oo loo maareeyo sida ugu.
Xaaladaha Gaarka ah iyo daayey
Iska ilaali xaaladaha gaarka ah ee wordings siyaasadda. Tusaale ahaan, Siyaasadaha qaarkood karta iney u oggolaadaan caymisku ay u isticmaalaan qeybo ka mid aftermarket in la dayactiro baabuurta ah caymis socda magdhow in ay. Tani waxaa laga yaabaa in aanay noqon arin weyn haddii aad leedahay jir baabuur ah oo aad helayso qiimo dhimis fiican sababtoo ah xaalad this. Laakiin aadan rabin xaaladaha sida marka aad leedahay gaari wayaadan cusub oo qaali ah.
No Car Edboonaanta
Dabeecad kale oo la mid ah siyaasadaha raqiis ah waa laga yaabaa in aanay u bixiyaan si xushmad baabuur idinkaa iska leh marka waa in garaashka la dayactiray. Mar labaad, this laga yaabaa in aanay arin weyn aad iyo dhab ahaantii aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inaad hesho qiimo dhimis hadda halkii ay ka qaadan xushmad baabuur haddii aad baabuur abid waxyeelloobo. Just in dad badan oo ka caban ka dib markii ay dhacdo in la siininna xushmad baabuur marka jirin bixinta sida ay siyaasadda.
Haddii loo maleeyo in dhamaan siyaasadaha waa isku mid
A hal auto caymiskaaga ayaa laga bixinaya laga yaabaa in dhowr heerarka kala duwan ee siyaasadaha in male ahayna kuma dhammaan siyaasadaha lagu iibiyo suuqa noqon lahayd mid ah waa Jaahiliin yara. Siyaasad kasta waxa uu kala duwanaansho yar ama wayn ka midba midka kale. Guud ahaan waa ka muuqataa sicirka. Sida laga soo xigtay cheapautoinsurance.net, "Waxaad ka heli kartaa in ka yar siyaasad lagu qanci karo iyo bixiyo weli joogtada ah ee caymiska buuxa iyo jeer haddii aad si ka raadisaa ku guuldareystaan".
Heerarka loo maleeyo in la mid yihiin guud ahaan Suuqa
Mar labaad, tani waa filasho ah aan caqli gal ahayn, sababtoo ah shirkad kasta waa shaqsi sida ay ishu. Waxay leeyihiin khatar lahaansho iyo premium xisaabinta iyo hab gaar ah ordaya ganacsigooda. Marka shirkad waa mid aad loo jecel yahay ay si dabiici ah u noqon lahayd in ay qaado ugu wanaagsan ee daah marka la eego halista awoodi. Marka ay arkaan calaamad yar oo khatar waxay Guranayeen si deg deg ah kor u kaca qiimaha. Si kastaba ha ahaatee, oo ah shirkad caan ah oo yar ayaa u baahan inay qiimaha ay baaritaan si loo hubiyo in u talin jiray hawsha ay ku guuleysan karaan.
Bixinta by Billaha qaybood
Dabcan, way fududahay inaad bixiso bishiiba hal jeer shaki kuma jiro, waxay ku saabsan. Si kastaba ha ahaatee, Khidmadda abaalmarinta caymiska waxa sabab u ah bixinta waqtiga la aasaasay. Haddii shirkada la oggolaadaan in aad si aad u kala bixinta ay ku bixinayaan credit. Tani guud ahaan yimaado kharash ah. Sida caadiga ah waxay ka qaadaan xiisaha sidoo kale wuxuu qiimo dhimis gaar ah oo loogu talagalay dadka ku bixin-galinta iyo in si buuxda. Waxaad doonto bixinta dheeraad ah haddii aad u faafin bixinta.
Gadashada qaali ah si loo hubiyo inay Automobile
Gaadiidleydu badan oo iibsaday baabuur oo ogaaday ka dib in aad qaali yahay si loo hubiyo inay gaadiid cusub. Marka ay ka fiirsanayaan in baabuurta isboortiga aad, SUVs, 4x4s iyo kuwa aan caadi ahayn aad waa inay ogaadaan in waxa laga yaabaa inay qaali ah si ay u caymiyaan. Kala duwanaanshaha Premium noqon kartaa intii saddex jeer ka badan inta u dhaxaysa doorashada baabuur A iyo B Car.
Uma baahnid in aad in la ogaado siraha badan si aad u hesho caymiska baabuurta la awoodi karo. Laakiin, aad u baahan tahay in la ogaado oo ka war ah tricks yar. Markaas, aad ka ogaan kartaa lacagta cusboonaysiinta ka dib cusboonaysiinta. Haddii lagu guul daraysto si ay u dhawraan mabaadi'da aasaasiga ah ee lacagta aad ku kici karaan.